घर बिदामा हिडेका नेपाली सेना घर नपुग्दै बाटोमै ज्या’न गु’माए : मनमा अलिकति दया भए फोटो छोएर (RIP)लेख्नुहोला,,हार्दिक श्रद्धाञ्जली!!
नारायण नगरपालिका वडा नं.११ विन्द्य्यावासिनी काँडा (भक्केमुला) निवासि हाल नेपाली सेनामा धनगढीमा कार्यरत तिर्थ बहादुर बिष्टका जेष्ठ छोरा नवीन बिष्ट (यामु) धनगढीबाट घरविदामा दैलेख आउदै गर्दामोटरसाइकललाई गाडि’ले ठ’क्कर दिदा उन’को ज्या’न गएको छ ।
नारायण नगरपालिका वडा नं.११ विन्द्य्यावासिनी काँडा (भक्केमुला) निवासि हाल नेपाली सेनामा धनगढीमा कार्यरत तिर्थ बहादुर बिष्टका जेष्ठ छोरा । नवीन बिष्ट (यामु) धनगढीबाट घरविदामा दैलेख आउदै गर्दा मोटरसाइकल लाई गाडि’ले ठ’क्कर दिदा उन’को ज्या’न गएको छ ।
योपनी,गोलभेडा खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा ! छालाको सम’ स्याबाट पाउनुहोस छुट’। एजेन्सी । गोलभेडामा लाइकोपेनको मात्रा अत्यधिक हुने भएका कारण यसले छालाको समस्याहरुलाई टाढा राखी तपाईंको सुन्दरतालाई निखार्ने काम गर्दछ ।
यसका साथसाथै यसले तपाईंको छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै गोरो पनि बनाउँदछ ।यसले तपाईंको कपालमा कन्डिसनरको काम गरि कपाललाई चम्किलो र नरम बनाउन सहयोग गर्दछ ।
गोलभेडाले तपाईंको छालाको रङलाई सफा गर्दछ, गोलभेडा स्वास्थको दृष्टिकोणले निकै राम्रो मानिन्छ र जसलाई छालामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो साँचो हो, यदि तपाईं दैनिक रुपमा गोलभेडाको जुस पिउनुहुन्छ र गोलभेडालाई आफ्नो छालामा रगड्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको छालालाई केहि दिनमा नै निखार ल्याउन मद्दत गर्दछ ।
यो भिटमिन सी को राम्रो स्रोत भएकाले यसले छालालाई चम्किलो बनाउन मद्दत गर्दछ । छालाको समस्यालाई टाढा राख्दछः गोलभेडाको बिउको तेलले छालाको अधिकांस समस्याहरुलाई टाढा भगाउन मद्दत गर्दछ ।
२०७८ मंसिर ५, आईतवार प्रकाशित0Minutes 148 Views